လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းခြင်း၏ဓလေ့ထုံးစံနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများ (၁၉၉၃) - သင့် ဦး နှောက်တွင် Porn On
မှတ်ချက်များ - တူညီသောလိင်လှုံ့ဆော်မှုများ (ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်) ကိုလေ့ကျင့်ခြင်း (dopamine တုန့်ပြန်မှုကျဆင်းခြင်း) နှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအသစ်တစ်ခုနှင့်ထိတွေ့သောအခါလိင်စိတ်နှိုးဆွမှု (dopamine တိုးလာခြင်း) ကိုသရုပ်ပြခြင်း။ ဤသည်မှာအလုပ်၌ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် - လိင်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်တစ်ခုနှင့်တင်ပြသည့်အခါနောက်ထပ် dopamine ။ အသစ်အဆန်းသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအတိတ်က porn များနှင့်ကွဲပြားခြားနားစေသည်။
Res Ther ပြုမူနေ။ 1993 Jul;31(6):575-85.
Koukounas E ကို, R ကိုကျော်.
တဆယ်ခြောက်ယောက်ျားသူတို့အများအပြားအခါသမယအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်၏တူညီသောအစိတ်အပိုင်းကြည့်ရှုအားပေးသို့မဟုတ်တူညီသောခေါ်ဆောင်သွားစိတ်ကူးယဉ်ထဲမှာအကြိမ်ကြိမ်စေ့စပ်ဘယ်မှာအခြေအနေများအောက်တွင်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်မှုတွေကျော် penile tumescence နှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထအတွက်လျှော့သူတို့ (နှင့်စိတ်ကူးယဉ်၏အမှု၌, သူတို့ကဖွဲ့စည်းသောရုပ်ပုံများကိုလျော့နည်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်း) ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်အဆိုပါဖြစ်ရပ်များအတွက်လျော့နည်းစုပ်ယူခံစားမိကြောင်း Ss ထံမှအစီရင်ခံစာများဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့ကြသည်။
covariance ၏ analysis ထားတဲ့စုပ်ယူမှုအတွက် (နှင့်စိတ်ကူးယဉ်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ပုံရိပ်၏ Vivid အတွက်) ထုံးစံခေါ်ဆောင်သွားဆွကာလအတွင်းပြောင်းလဲသွားဘို့စရိတ်လုပ်သောအခါလေ့ (စမ်းသပ်မှုတွေကျော်လိင်စိတ်နိုးထ၏ဇီဝကမ္မနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီအမံအတွက်လျော့ချရေး) လျော့နည်းခဲ့ပါတယ်။ ပြသ ဝတ္ထုခေါ်ဆောင်သွားဆွလေ့အောက်ပါမိတ်ဆက်သောအခါလိင်စိတ်နိုးထအတွက်တိုး, အဖြစ်လည်းပုံရိပ်၏အတိုင်းအတာစုပ်ယူမှုနှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဆက်နွယ်နေကြောင်းမူရင်းလှုံ့ဆော်မှုပြန်လည်ရုတ်သိမ်းအခါတွေ့ရသော dishabituation ဤအခြေအနေများအောက်တွင်အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားလေသည်။ ရလဒ်အထီးလိင်စိတ်နိုးထ၏လေ့ထပ်ခါတလဲလဲခေါ်ဆောင်သွားဆွစဉ်အတွင်းစုပ်ယူမှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အခြားရှုထောင့်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအပြောင်းအလဲများကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရှိမရှိမှရည်ညွှန်းနှင့်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်။